Ndụmọdụ 5 maka onye na-ede ọdịnaya nke mmalite teknụzụ
Ebe E Si Nweta: Kolabtree
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ azụmahịa na ọrụ ụlọ ọrụ abanyela dijitalụ na mkpa maka ọdịnaya ịntanetị aghọwo isi ahịa na usoro mgbasa ozi maka ọ bụghị naanị azụmahịa, kamakwa maka ndị mmadụ n'otu n'otu.
N'ihi ya, a na-achọ ndị na-ahụ maka ọdịnaya na ndị edemede. A naghị ahapụ ụlọ ọrụ teknụzụ na mmepe a na ndị mmadụ n'otu n'otu na-amalite ịdabere na ide ọdịnaya dị ka ụzọ ọrụ.
Yabụ, n'ime edemede a, anyị achịkọtala ndụmọdụ 5 maka onye na-ede ọdịnaya teknụzụ na-eche echiche / onye mbido:
Gụọ nke ọma
Ọ dị mkpa ka onye ọ bụla na-ede ọdịnaya gụọ ngwa ngwa. Iji bụrụ onye ode akwụkwọ ka mma, ịgụ akwụkwọ kwesịrị ịbụ àgwà na e kwesịghị ileghara ya anya.
Ka ị na-agụkwu akwụkwọ, ị ga-amaka ịde ụdị ede ma emechaa, ị ga-enwe mmasị na nke kacha mma maka gị.
Maka ndị na-ede teknụzụ karịsịa, ọ bụ ihe kachasị mkpa ka ị na-agụ n'ọtụtụ ebe n'ime nkà gị ka ị nwee ike ịnọgide na-emelite na n'ihu ndị ọzọ n'otu mpaghara ahụ.
Ndụmọdụ ọzọ bara uru maka ndị na-ede ọdịnaya teknụzụ mmalite na-ajụ ajụjụ. Ịjụ ajụjụ gbasara ihe ọ bụla na ihe niile bụ ka onye ọ bụla na-ede akwụkwọ nkà na ụzụ na-esi amụba nkà ha.
Ị nwere ike isonyere otu ma ọ bụ obodo ebe ị nwere ike ibiaghachi echiche n'aka ndị òtù ma ọ bụ na ị nwere ike dị nnọọ arapara na-eme anyị nnyocha.
N'ihe niile, nọgide na-emelite na agụụ ozi-agụụ n'ihi na ọ na-adị ọhụrụ mgbe niile ịmụta.
Mara ma ghọta ndị na-ege gị ntị
Nke a bụ otu n'ime isi ihe ọ bụghị naanị ederede teknụzụ, mana ide ọdịnaya n'ozuzu ya.
Ịgbalị ịmara ndị na-ege gị ntị nwere ike ịtọ ụda maka akụkọ gị dum.
Ọ nwere ike ịga ogologo ụzọ site n'inyere gị aka nyochaa ihe kwesịrị na ekwesịghị ịdị na edemede gị.
Yabụ, ọ dị ezigbo mkpa ime nyocha gbasara ndị na-ege gị ntị wee ghọta ihe ha na-ekwu ka ị mara ụzọ gị.
Mee ya ka ọ dị nfe
Otu njiri mara ndị na-ede ọdịnaya teknụzụ dị mfe bụ mfe. Ịtụgharị isiokwu gbagwojuru anya / mgbagwoju anya ka ọ bụrụ akụkọ dị mfe nghọta bụ nkà onye ọ bụla na-ede ihe ọdịnaya teknụzụ nke mmalite kwesịrị inwe.
Aghụghọ dị mma bụ iche na ndị na-agụ gị bụ ndị novice na isiokwu ị na-ede ma na-eme ka ọ dị mfe ka ha wee gbarie.
Nke a apụtaghị na akụkọ gị kwesịrị inwe nkọwa zuru ezu, n'eziokwu, ọ ga-abụ nke zuru oke maka onye ọ bụla iji nweta echiche dum nke ihe ị na-ede.
Omume, Omume, Omume
Ọkachamara ọ bụla ị na-ahụ taa bụbu onye ọhụrụ. Ha bụ ndị ọkachamara ugbu a n'ihi na ha na-etinye ọrụ ahụ site n'ịrụ ọrụ mgbe niile dị ka onye ọhụrụ ma na-arụ ọrụ ha na ọkwa ọkachamara na ọkachamara.
Dị ka okwu ochie na-ekwu, "omume na-eme ka ọ dị mma", na nke a abụghị ihe ọzọ.
Ịbụ onye na-ede ọdịnaya teknụzụ chọrọ ka ị nweta mmasị ide ihe na ọ bụghị naanị dee otu ugboro n'ime puku iri na-acha uhie uhie. Mara onwe gị aka ma ọ dịkarịa ala otu akụkọ kwa ụbọchị wee lelee onwe gị ka ọ na-agba ọsọ.